भक्तपुरमा साझाले बस चलाउने अनुमति किन पाएन ? « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
भक्तपुरमा साझाले बस चलाउने अनुमति किन पाएन ?
८ बैशाख २०७४, शुक्रबार ०७:११
काठमाडौँ, ८ वैशाख । साझा यातायातले भक्तपुरमा ‘रुट परमिट’ माग गरेको एक महिना बित्दा पनि यातायात व्यवस्था विभाग वाग्मती अञ्चल कार्यालयले अनुमति दिएको छैन ।
यातायात क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुभएका भक्तपुरका स्थानीयवासी रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायीको दबाबमा विभागले अनुमति नदिएको बताएका छन् ।
कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारी साझाका बस कोटेश्वरबाट भक्तपुर लैजादा जे पनि हुनसक्ने भनी केही यातायात समितिले उजुरी दिएकाले ‘रुट परमिट’ दिन ढिलाइ भएको बताए ।
“सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८२ मा विवाद भएको मार्गमा ‘रुट परमिट’ दिन नसक्ने व्यवस्था भएकाले अहिले नदिइएको हो, यस विषयमा यातायात व्यवस्थापन समितिमा एक चरण छलफल भइसकेको छ, अब स्थानीय तह निर्वाचनपछि लगत्तै समितिको बैठकमा यो विषय प्रवेश हुनेछ”–उनले भने।
प्रकाशित : ८ बैशाख २०७४, शुक्रबार ०७:११